Hadii Aad Tahay Aabo Markaa Gurigada Imaato Keebaa Ku Hormartaa Hooyada Iyo Caruurtaadaa.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: March 7, 2014, 12:00 am
Hadii Aad tahay aabo qoys leh o aay sugayaan mustaqbal dheer ma u fikirtay ugu horeyn si u qoyskaaga u dhisnaado in ay tahay in aad qanciso xaaskaada, hadaba wiilyahoow sidee u qancin kartaa xaskaaga waa suaal maskaxdaada aay is weeydiiso hadana uma jawaabtid maskaxdaada hadaba maantay waxaan kusiinayaaa qodobo gaaban kuwaasoo kuu sahlayo in aad xaskaaga qanciso.
Qodobadaan ma ahaan doonaan kuwo adag in lasameeyo hadiii aadan adiga cusleysan, ogoow akhristoow wax walbo oo culus hadii aad fududeysato wa kuu fududaanayaan, wax walbo oo fududna hadii aad culeys kadhigato waa kugu cuslaaneysaaa.
Haddaba akhristoow baro qodobadaan gaban iskuna day inaad kula dhaqanto xaaskaaga si aad u hesho qoys kalgaceyl kudhisan, hadii aay xaaskaaga intaan kaa esho waxaa hubanti ah in aaysan ebid ku iloobi doonin qoyskaagana farxadiisa laga dheehan doono deriskaaga.
Hadii Aad tahay aabo aay caruur ujoogaan inta badan markaa guriga imaato waa suaal isweeydiis mudanee ilmahaaga iyo xaaskaaga keebaa ku haormartaa oo aad lacayaartaa ma caruurtaada baa inta aad kuhormarto cayaarsiisaa oo boobootisaa ama xaaskaaga ayaad kuhormartaaa oo aad shumisaa una mahad celisaaa aabanimada aay kaadhigtay ilaah kasokoor.???
Runtii aniga fikrad ahaanteyda wax dareen badalan ma sameyneyso hadi aad markaad timaado aad weji faraxsan guriga kusoo gasho hooyada ama caruurta ka kuhormartaba, balse waxaa dareen diiqad ah abuurayo markii aad soo gasho oo aay ilmahaada keliya inta aad cayaar siiso hooyadoodna ad ka aamusto, noqo mid hoyada iyo caruurtaba marku soo galo lawada cayaaro.
Hadii aay gabar ku joogto ayada oo ku dhaw waxad dhahdaa gabarteydiiyeey waxa aay u dhacatay nolol raaxo leh kunoolaan doono ninkii aan kusiiyo maxaa yeelay gabar weliba waxey raacdaa barbaarinta hooyaded hooyaadaana sidii loo soo barbaari ayey kuu barbaarineysaaa.
Mararka qaar waxaad ku tiraahdaa wad daashay ilmaha haayntooda iyo shaqada guriga kama bixi kartid maantay waxaan noo keenayaa cunto maqaayad sida Canjeero Daafeed ” Canjero Ithopian” heheheheheh.
Maalinti aad kamaqantahay xaaskaaga usheeg meelaha aad joogto iyo meelaha aad aadi doonto, lamaanahaaga inta aad kamaqantahay meelaha aad kumaqantahay aaad sida runta ah ugu sheegto waxey abuurtaa kalsooni farxadeeed.
Laguma soo koobi karo qoraaal waxyaabaha aburo qoys farxad kuwaaro balse hadu ALLE idmo mar weliba inyar baan ka qori doona oo aan isleeyahay bulshadaada waa anfaceysaaaa.
FG: Maqaalkan waa fikradeyda wixii kula qaldanaado iisax wixii saxana kaqaado, mahadsanid Akhrinta iyo waqtiga aad kubixisay.